अस्पतालमै प्रदर्शनी गर्नुको कारणचाहिँ के हो ? - संवाद - नेपाल
अस्पतालमै प्रदर्शनी गर्नुको कारणचाहिँ के हो ?
- मनबहादुर बस्नेत
पेसाले नर्स हुन्, रचना मास्के, ४० । तर, उनी कर्मस्थलमा बिरामीको सेवा मात्र गर्दिनन्, बिरामीको मनोभाव, मनोदशालाई आफ्नो क्यानभासमा समेत उतार्छिन् । उपचारार्थ आउने बिरामीहरुको दुर्दशालाई चित्रमा उतारेर मास्केले आफू कार्यरत महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमै चित्रकला प्रदर्शनी गरिन्, त्यो पनि बिरामीकै लागि । २८ देखि ३० भदौसम्म चलेको प्रदर्शनीबारे उनीसँग गरिएको कुराकानी :
यहाँ आउने बिरामीहरूमा आर्ट थेरापी होस् भनेर यस्तो सोच बनाएकी हुँँ ।
कस्तो आर्ट थेरापी ?
जसरी संगीत सुनेर कोही मानिस आनन्दित हुन्छ र आफ्नो रोग, पीडालाई भुल्न या कम गर्न सक्छ, त्यसरी नै आर्ट हेरेर मानिसले त्यही अनुभव गरून् भन्ने मेरो उद्देश्य हो । चित्र हेरेर मन शान्त बनाउन सकून् र रोग निको हुन सहयोग गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
यो प्रदर्शनीको उद्देश्यचाहिँ के हो ?
नर्सका रूपमा १९औँ वसन्त पार गर्दा मैले वृद्धवृद्धा बिरामीहरूलाई नजिकबाट बुझेँ । उनीहरूको पीडा, अवस्था, छोराछोरीबाट हुने व्यवहार जम्मै हेरेँ । यो सबै देख्दा मलाई उनीहरूका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पैदा भयो र यो प्रदर्शनीबाट जम्मा भएको सबै रकम ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाहरूकै उपचारमा खर्च गर्नेछु ।
अस्पतालमा आउने बिरामी वृद्धवृद्धाको अवस्था कस्तो हुँदोरहेछ र तपाईंलाई यति भावविह्वल बनायो ?
७५ वर्ष उमेर कटेकाहरूको उपचारमा पैसा खर्च गर्न अधिकांशले नमान्ने रहेछन् । त्यसपछि धेरैजसो उपचारै नगरी फर्किन्छन् । उपचार पाएमा अझै केही समय बाँच्न सक्नेहरूसमेत रोग निको नभई अस्पतालबाट जान्छन् । यसले मलाई असह्य तुल्यायो ।
किन पैसा खर्च नगर्ने रहेछन् ?
कतिपयको त आर्थिक हैसियत नै त्यस्तो भएर पनि होला । कतिपयको चाहिँ यो उमेरमा पैसा खर्च गरी गरी उपचार गरेर पनि के गर्नु भन्ने पनि होला । बिरामी वृद्धवृद्धाले उपचार नगरौँ, जाऔँ भन्दा छोराछोरीले कर गरेर निको भएपछि मात्रै जाने एकदमै कम देखेँ । ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा उदासीन यो अवस्था देखेर जनरल बेडको खर्च भए पनि जुटाउन सकेँ भने बिरामी थप केही समय बाँच्न सक्छन् भनेर यो चित्रकला प्रदर्शनी गरेकी हुँ ।
यो प्रदर्शनीबाट तपाईंको लक्ष्य पूरा होला ?
हुन्छ । थुप्रै जनाले सहयोग गर्नुभएको छ । ३२ वटामध्ये २० वटा चित्र बिकिसके । ८ देखि २० हजार मूल्यमा बिक्री भएका छन् । कतिपयले चन्दा बक्समा समेत सहयोग गर्नुभएको छ ।
तपाईंले पहिले आर्ट ग्यालरीमै प्रदर्शनी गर्नुभएको थियो । अहिले अस्पताललाई रोज्नुभयो । के भिन्नता पाउनुभयो ?
अस्पतालको प्रदर्शनी प्रभावकारी भएको छ । किनभने, यहाँ आउनेहरू विभिन्न पीडा, समस्यामा हुन्छन् । ग्यालरीका आगन्तुक र अस्पतालको प्रदर्शनीमा आउने आगन्तुक बिलकुल फरक छन् । माया गरेर कसैको जीवन बचाउन सकियो भने त्यसले दिने आनन्द छुट्टै हुन्छ भन्ने यहाँको प्रदर्शनीमा आउनेले थाहा पाए ।
यहाँ आउनेहरूको प्रतिक्रियाचाहिँ कस्तो थियो ?
एकदमै फरक । मैले प्रत्येक चित्रबारे कविता पनि लेखेकी थिएँ । चित्र हेरेर र कविता पढेर कतिपय त आफ्नो दुखद विगत सम्झिँदै रोए पनि । त्यही भएर प्रदर्शनीले छुट्टै सन्देश दिन सफल भयो कि जस्तो लाग्छ ।
कस्तो सन्देश दियो प्रदर्शनीले ?
बुबा–आमा मरेपछि प्रशस्त दान गर्ने हाम्रो परम्परा छ । तर, स्वर्गमा पुगेर हामीले दिएको सामान बाआमाले पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कसैले देखेको छैन । त्यसैले मरेपछि होइन, जिउँदो हुँदा बुबाआमाका लागि उपचार गर्न सकियो र उहाँहरूलाई थप केही दिन बचाउन सकियो भने त्यही नै ठूलो पुण्य हो भन्ने सन्देश दिएको छ कि भन्ने लाग्छ ।
प्रकाशित: आश्विन ५, २०७४
थप केही संवाद बाट
गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ’
चैतन्य मिश्र भन्छन् : 'गाली गर्दैमा समृद्धिको बहसबाट मुक्ति पाइन्न'
असार १३, २०७५
‘चर्चा कमाउने मनसाय छैन’
‘हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवाद होइन भन्नेमा नेकपाभित्र एकमत भयो’
जेष्ठ १६, २०७५
‘ओली र प्रचण्ड टेन्टभित्रका तान्त्रिकजस्ता’ [भिडियो सहित]
‘जनवादी केन्द्रीयताको मनो विज्ञानले संघीयता चल्दैन’
वैशाख ३, २०७५
'राजनीतिक परिवारबाट आएकाहरू सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु राम्रो’
वैशाख २, २०७५
‘राजनीतिक क्रान्ति गरियो, अब विकासमा क्रान्ति’
चैत्र २७, २०७४
चैत्र १४, २०७४
‘मलाई किन छुटाइयो, दुई अध्यक्षलाई सोध्नूस्’
चैत्र १२, २०७४
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको साप्ताहिक प्रकाशन हो, नेपाल । पूर्ण रंगीन कलेवरमा प्रकाशित यो मुलुककै पहिलो साप्ताहिक म्यागेजिन हो । डेढ दशकदेखि यसले पाठकसमक्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकुद, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रका खोजमूलक एवं विश्लेषणात्मक सामग्री पस्कँदै आएको छ । राष्ट्रिय राजनीति, नीतिनिर्माण र सामाजिक अभियानमा यसको योगदान अग्रपंक्तिमा छ । यसका प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मा हुन् ।पुरा पढ्नुहोस् »